I-Cottage in the Trees- Hamba uye eDowntown AVL - I-Airbnb
I-Cottage in the Trees- Hamba uye eDowntown AVL
443 okushiwo abanye
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Brett
I-wifi esheshayo engu-93 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
U-Brett Ungumbungazi ovelele
Izwa ukunethezeka kwalokhu okuyimfihlo, kwesimanjemanje, okunethezekile okufanelekile. (260sqft) enompheme wangasese, indawo yokungena, nendawo engadini yangaphandle ebekwe phakathi kwezihlahla ezinkulu enhliziyweni ye-Asheville, NC enhle.Ukupaka edolobheni kungaba nzima, hlala lapha futhi ungakwazi ukuhamba kuwo wonke edolobheni!I-Iconic Pack Square, iFrench Broad Chocolate Lounge phakathi kwezinye izindawo eziningi zokuphisa utshwala, izindawo zokudlela, nezindlu zekhofi (5-10 min. walk). Indawo eyimfihlo, yesimanje exhunywe ekhaya enezinsiza eziningi. Indawo yokupaka yangasese
--HAMBA UYE ENHLIZIYWENI YASEDOWNTOWN NGEMIZUZU 5-10
--I-AIRBNB STUDIO YAKHO EYI-COMZY APT. (260 Sqft.) Iyimfihlo FUTHI Inamathiselwe ENDLINI, AYIHLUKILE
--INDAWO YOKUPAKA ILIZWE, OKUNGENA, UMVANDA NGAPHANDLE KANYE NENDAWO YOKULULA, KANYE NE-AIRBNB
—Buka ukushona kwelanga ngesiphuzo osithandayo futhi uphumule kuvulandi yakho yangasese
--Indawo yokuhlala ethule futhi eyimfihlo.
--Lala kumatilasi we-Queen Deluxe Foam.
--Ikhofi yesitoko noma itiye, shisisa okusalile, noma pholisa ubhiya kwenye yezindawo eziningi zokuphisa utshwala zase-Asheville efrijini.
--Ukudla okuthokomele, amanzi, ubhiya wasendaweni ovela kwenye yezindawo zotshwala eziningi zase-Asheville, nokunye okumnandi.
--Nethezeka futhi ubukele i-Netflix ku-40 Inch UHD Smart Flat Screen TV.
--Igumbi lokugezela langasese elinebhavu elinosawoti wokugeza kanye nomcamelo walabo busuku ofuna ukuphumula.
-Keyless Entry ukuze kube lula kuwe
-Sibheke ukuhlalisa izivakashi eziningi noma indawo enkudlwana yokubheka okunye ukufakwa kuhlu kwethu I-Charming Cottage
-Hlala useduze ne-Biltmore kumahektare ambalwa bheka uhlu lwethu lwe-Villa Rose
I-HDTV engu-42" ene- I-Roku, I-Netflix, Disney+, I-HBO Max, Hulu, I-Amazon Prime Video
4.95 · 443 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-443
-Kuthule futhi Kunobungane
-Kuhle ukuze kube lula ukuhamba edolobheni
-Kuphephile futhi kukhanyiswe kahle
Ngifuna ube nesipiliyoni esihle e-Asheville ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngisebenze emahhotela amahle iminyaka eminingi futhi ngikholelwa ekunikezeni amakhasimende okuhle.Ngilapha ngenxa yesivakashi noma kungaba imibuzo noma okuthile okwengeziwe ongakufisa futhi ngiyabuhlonipha nobumfihlo.Ngihlala phezulu futhi ngithule. Futhi, nginikeza ulwazi oluningi oluwusizo ku-Guest Manual ku-studio ngeziphakamiso ezifana nohambo oluphezulu oluya ezindaweni zokudlela ukuya ezindlini zekhofi.
Ngifuna ube nesipiliyoni esihle e-Asheville ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngisebenze emahhotela amahle iminyaka eminingi futhi ngikholelwa ekunikezeni amakhasimende okuhle.Ngilapha…
UBrett Ungumbungazi ovelele